Vaovao - fakantsary fakantsary hafanana tsy misy fotony miaraka amin'ny "maripana"
Ny hazavana voajanahary dia misy onja maivana misy halavan'ny halavam-potoana. Ny elanelana hitan'ny mason'olombelona dia 390-780nm. Ireo onja elektromagnetika dia fohy kokoa noho ny 390nm ary lava noho ny 780nm tsy ho tsapan'ny mason'olombelona. Anisan'ireny, ny onja elektromagnetika misy halavan'ny onja latsaky ny 390nm dia ivelan'ny volomparasy ny hazavan'ny hazavana hita maso ary antsoina hoe taratra ultraviolet; Ny onja elektromagnetika lava mihoatra ny 780nm dia ivelan'ny mena amin'ny hazavan'ny hazavana hita maso ary antsoina hoe infrared, ary ny halavan'ny halavany dia 780nm ka hatramin'ny 1mm.
Infrared dia onja elektromagnetika misy halavany eo anelanelan'ny mikrôves sy ny hazavana hita, ary manana ny fotony mitovy amin'ny onja radio sy hazavana hita. Amin'ny natiora, ny zavatra rehetra manana mari-pana ambony noho ny aotra (-273.15 ° C) dia mirehitra tsy tapaka amin'ny taratra infrared. Io fisehoan-javatra io dia antsoina hoe taratra hafanana. Ny teknolojia fampahalalana hafanana infrared dia mampiasa detector radiation micro micro, tanjona fitarafana optika ary rafitra scanning opto-mekanika handraisana ireo signal taratra infrared an'ny zavatra haleha, ary ny lamina fizarana angovo taratra infrared dia hita taratra amin'ny singa photosensitive an'ilay detector infrared aorian'ny fanivanana ny spectral sy ny sivana spatial, izany hoe ny sary mafana infrared amin'ilay zavatra refesina dia nojerena ary mifantoka amin'ilay unit na detector spektroskopika, ny angovo misy taratra infrared dia navadiky ny detector ho lasa signal elektrika, izay nohamafisina ary navadika ho video mahazatra famantarana, ary aseho ho toy ny sary mafana infrared amin'ny efijery TV na monitor.
Infrared dia onja elektromagnetika manana ny fotony mitovy amin'ny onja radio sy hazavana hita. Ny fahitana ny infrared dia dingana lehibe amin'ny fahalalan'ny olombelona ny natiora. Ny haitao izay mampiasa fitaovana elektronika manokana hanovana ny fizarana mari-pana ambonin'ny velaran'ny zavatra iray ho lasa sary hitan'ny mason'olombelona ary mampiseho ny fizarana mari-pana eo ambonin'ilay zavatra amin'ny loko isan-karazany dia antsoina hoe teknolojia fakana sary mafana infrared. Ity fitaovana elektronika ity dia antsoina hoe mpaka sary mafana infrared.
Ny sary mafana infrared dia mampiasa detector infrared, tanjon'ny fakantsary optika ary rafitra scanning opto-mekanika (ny haitao mandroso mandroso ankehitriny dia manafoana ny rafitra fitiliana mekanika opto-mekanika) hahazoana ny lamina fizarana angovo taratra infrared an'ny zavatra mba ho refesina ary haneho izany amin'ny singa photosensitive an'ny detector infrared. Eo anelanelan'ny système optika sy ny detector infrared, misy ny mekanika scanner-optika mekanika (tsy manana an'io mekanika io ny sary mihetsika mafana) raha hizaha ny sary mafana infrared an'ny zavatra haleha ary hampifantoka azy amin'ilay unit na detector spectroscopic . Ny angovo taratra infrared dia navadika ho signal elektrika avy amin'ny detector, ary ny sary mafana infrared dia aseho amin'ny efijery TV na monitor aorian'ny fanamafisana sy fanovana ho fambara video mahazatra.
Ity karazana sary mafana ity dia mifanentana amin'ny sahan'ny fizarana hafanana eo ambonin'ilay zavatra; raha ny tena izy dia ny sary fizarana sary mafana amin'ny taratra infrared an'ny faritra tsirairay amin'ilay zavatra haleha. Satria malemy be ny famantarana, raha ampitahaina amin'ny sary maivana hita, tsy manana gradation sy refy fahatelo izy. Mba hitsarana ny sahan'ny fizarana hafanana infrared an'ny zavatra mba ho refesina amin'ny fomba mahomby kokoa amin'ny fizotran'ny hetsika, ny fepetra fanampiana sasany dia matetika ampiasaina mba hampitomboana ireo fiasa azo ampiasaina amin'ilay fitaovana, toy ny fifehezana ny famirapiratan'ny sary sy ny fifanoherana, ny tena fenitra fanitsiana, contour fanaovana sary tsy marina ary histogram ho an'ny asa matematika, fanontana sns.
Ny fakantsary fakana sary mafana dia manome toky amin'ny indostrian'ny vonjy taitra
Raha ampitahaina amin'ny fakantsary fahazavana nentim-paharazana izay miankina amin'ny hazavana voajanahary na manodidina ho an'ny fanaraha-maso fakan-tsary, ny fakantsary fakana sary mafana dia tsy mitaky hazavana, ary afaka mazava tsara ny sary miantehitra amin'ny hafanana infrared taratr'ilay zavatra mihitsy. Ny fakantsary fakana sary mafana dia mety amin'ny tontolon'ny jiro ary tsy voakasiky ny hazavana mahery. Afaka mamantatra sy mahita tanjona kendrena mazava tsara izy io, ary mamantatra ireo lasibatra miafina sy miafina na inona na inona andro na alina. Noho izany, tena afaka mahatsapa ny fanaraha-maso 24 ora izy io.